Wararka Maanta: Talaado, Oct 26, 2021-Tirada dadka ku dhintay dagaallada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Ahlusunna Waljamaaca oo gaartay 120 qof
Ugu yaraan 600 oo kale ayaa ku dhaawacmay dagaalka sida uu sheegay Xasan Yare oo ah sarkaal ka tirsan ururka Ahlusunna Waljamaaca, isagoo wareysi siinayay wakaaladda wararka ee Reuters.
Sarkaalkan ayaa sheegay in Ahlusunna Waljamaaca qorshahooda uu yahay in ay dagaallamaan illaa askarigooda ugu dambeeya uu ku geeriyoonayo.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Galmudug, Axmed Shire Falagle, ayaa sheegay in 16-askari oo ka tirsan Ciidamada Dowladda lagu dilay dagaalka, isagoo sheegay in 45 kalana ay kaga dhaawacmeen.
Illaa iyo hadda ma jirto cid si buuxda gacanta ugu haysa magaalada Guriceel, inkastoo ciiddanka dowladdu maamulayaan magaalada inteeda badan.
Qaramada Midoobay ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dagaalka ay ku barakaceen ugu yaraan 100,000 oo qof. waxayna dalbatay caawimaad.